မင်းသမီးချော ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်းကတော့ ပရိတ်သတ်ချစ် မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပြီး မိဘအမွေတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရရှိခဲ့တာကြောင့် အလှူအတန်းများကို မပြတ်ပြုလုပ်နေသူပါ။သူမဟာ ”ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ်လား? ဘောလုံးဥက္ကဌလား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေက မြင့်တက်လာရာမှ ပရိသတိစိတ်ဝင်စားခံလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ မမဆောင်းက ဆီလီကွန်ထည့်ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို […]
ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးတမ်းစဉ်လာတွင် ကျေးဇူးဆပ်၍မကုန်နိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ငါးယောက်ရှိသည်ဟု ဖော်ပြ ထားပါသည်၊၊ (၁) ဘုရားရှင်၊ (၂) တရား၊ (၃) သံဃာ၊ (၄) မိဘ၊ (၅) ဆရာတို့ဖြစ်ကြပါသည်၊၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွင်မက လူသားတိုင်းတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးမှ ဘုရား၊ သင်ပြချက်၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်၊ မိဘ၊ ဆရာဟူ၍နည်းတူပင်ရှိကြပါသည်၊၊ဖော်ပြထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ငါးယောက်တို့၏ကျေးဇူးသည် များလွန်းသဖြင့်ရေတွက်ရန် […]
ကြၽန္ေတာ္ ေအာင္ေဇာ္တစ္ေယာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ Company ေလးတစ္ခုမွာ ဝင္လုပ္ေနသူပါ ။ အေဆာင္ငွါးကာ ေနခဲ့တာ အေဆာင္ဖိုးမရွင္းေပးႏိုင္တာ ႏွစ္လၾကာပါၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ္အေဆာင္ရွင္ လင္မယာက တ႐ုတ္ေတြပါ။ လူမယားႏွစ္ေယာက္ အသက္ေတြ ကြားျခားၾကပါေတ၊ မိန႔္မက ၄၀ ေက်ာ္၊ ေယာက္က်္ားက ၅၀ ေက်ာ္ပါ ၊ သူတို႔လင္မယားမွာ […]